Ambongadiny, manokana, Ballet Tutu, Ballet Performance Tutu, Ballet Costume, Ballet Leotard, mpanamboatra, Professional - China Suppliers Factory â € "Fitdance ballet factory.
an-trano > Fampidirana ny orinasa
Manana fampandrosoana 20 taona isika. Ny kalitao sy ny lazan'ireo vokatra vokarinay dia noraisin'ireo mpanjifa avy any ivelany sy avy any ivelany ary ankafizin'ny matihanina amin'ny sehatry ny dihy.
Izahay dia nifikitra tamin'ny lalànan'ny orinasa "Quality First, Credit First", izay manompo amin'ny sekoly dihy lehibe sy tia dihy erak'izao tontolo izao.
Any Sina, manana fiaraha-miasa lalindalina amin'ny Shanghai Ballet any an-toerana, Ballet Guangzhou, Ballet City Hong Kong ary orinasam-pandihizana nasionaly hafa izahay, ary niara-niasa tamin'ny sekolim-pampianarana dihy sy andrim-pampianarana dihy an'arivony hatreto.
Any ivelany, nanompo orinasa toa Flashdance Performing Arts izahay, ary nanolotra mpandihy eran'izao tontolo izao ny zava-bita tsara indrindra Tutu Ballet.
Fitdance dia mpanamboatra akanjo mandihy matihanina mampiditra endrika, famokarana ary fivarotana; ny orinasa manarona faritra mihoatra ny 3.000 metatra toradroa, manana fitaovana famokarana mihoatra ny 100, mpiasa mihoatra ny 200, ary vokatra isan-taona mihoatra ny iray tapitrisa.
Anisan'izany, ny departemanta Ballet Tutu dia misy mpamorona matihanina 4 sy mpiasa famokarana matihanina 20. Afaka mamokatra 800 Ballet Tutu isam-bolana izahay hihaonana amin'ny filanao mahazatra na ambongadiny.
Izahay indrindra dia mirotsaka amin'ny fanaingoana sy famokarana fitafiana ballet ifotony, ao anatin'izany ny ballet Leotard, Skirt ary akanjo.
Mandritra izany fotoana izany dia manohana ny serivisy namboarina ho an'ny ballet Tutu ihany koa izahay. Araka ny zavatra takinao, dia hanana fahatakarana tsara momba ny lalan'ny tantara an-tsehatra amin'ny dihy dihy izahay, amin'ny fandinihana ny loko, ny lamba, ny endrika, ny endrika, ny collocations, sns ny fitafiana, ary hanome anao ny drafitra famolavolana tsara indrindra.
Na, azonao atao ny manome sary na drafitra famolavolana ny vokatra rehetra. Ny mpamorona anay dia hampiasa ny fitsipiky ny CIS handrafetana tsara ho anao, ary miaraka amin'izay koa, amin'ny alàlan'ny rafitra CAD, azonay atao ny manamboatra Tutu tonga lafatra mifanaraka amin'ny ilainao.
Amin'ny alàlan'ny fiarovana ny vokatra dia hifantina ny baoritra mifanaraka amin'ny habe mifanaraka amin'ny habetsaky ny volantsika isika, hampihena ny habetsaky ny boky araka izay azo atao ary hampihena ny entana.
Momba ny lozisialy
Afaka manome fomba fitaterana isan-karazany toy ny DHL / EMS / SEA izahay. Azonao atao ny misafidy mifanaraka amin'ny ora fanaterana ilainao. Hanonona anao izahay araka ny habetsahana voamarina amin'ny baiko.
DHL: 3-7 andro
EMS: 7-20 andro
Momba ny varotra aorian'ny
Rehefa vita ny vokatra dia haka sary izahay ary handefa sary ho anao hampahafantatra anao ny fivoarany.
Rehefa mamoaka ny laharana faktiora fandefasana dia halefanay aminao haingana araka izay azo atao ary tohizanay hatrany.
Rehefa tonga any amin'ny toerana itodiana izy ity dia hifandray aminao indray izahay hampahatsiahy anao handray ireo entana.
Rehefa raisinao izany dia hanaraka ny kalitaony miaraka aminao izahay.
Ny orinasa dia manana rafitra fanatanterahana avo lenta, rafitra fitantanana serivisy. Akanjo dihy Feidance dia natao miaraka amina sehatra tsara tarehy sy endrika matihanina; miaraka amin'ny fitaovana mahafinaritra sy mahafinaritra; miaraka amin'ny fampitaovana fitafiana mandroso; miaraka amina asa-tanana kanto; Miaraka amin'ny fomba fiasa marina sy henjana an'ny olona Fitdance, amboary tsara ny vokatra tsirairay mba hahatonga anao ho kintana mamirapiratra indrindra eny an-tsehatra.
Miaraka amin'ny fanovana ny asan'ny tanàn-dehibe, ny fitaterana an-tanety an-dranomasina sy an-dranomasina ary ny fotodrafitrasa momba ny lozisialy feno, dia mora kokoa ny manompo ireo tia dihy erak'izao tontolo izao.
Mikatsaka kalitao tena tsara sy mametraka ny lazan'ny marika no iraka mafy orinay!
Fitdance, mety amin'ny akanjo anaovanao amin'ny dihy.